मेहबुबलाई कसले गोली हानेको थियो? - अपराध - साप्ताहिक
राजधानीको बसुन्धरास्थित पाकिस्तानी दूतावासको कन्सुलर शाखाका सह इन्चार्ज ३६ वर्षीय मेहबुब आसिफमाथि गोली प्रहार भएको घटनाको अढाई वर्षभन्दा बढी भैसकेको छ। उक्त घटनामा अहिलेसम्म कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्। अपराधीका बारेमा अनुमान गरिए पनि प्रमाण र पक्राउ गर्ने हिम्मतको अभावमा प्रहरी पछि हटेको जानकारहरूको दाबी छ। महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाका अधिकारीहरूले अझै फाइल खुलै रहेको र अनुसन्धान बन्द नभएको दाबी गरे पनि घट्नाको प्रकृति मुचुल्का तयार पार्नुबाहेक उनीहरूले यो दिशामा पाइला सार्न नसकेको छर्लङ्ग छ।
मोटरसाइकलमा गैरहेका मेहबुलाई पछ्याउँदै दुई पेस्तोलधारीले आक्रमण गरेका थिए। उनको निधार, पेट र दायाँ हातमा चारवटा गोली लागेको थियो। आसिफको महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचार भएको थियो। आक्रमणकारीहरूले उनको मोटरसाइकलसमेत लिएर भाग्ने हिम्मत गरेका थिए। उक्त घटना महाराजगन्जस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तबाट मात्र ३ सय मिटर दक्षिणमा भएको थियो।
आक्रमणकारीहरूले लगेको आसिफको मोटरसाइकल प्रहरीले फेला पारे पनि २०६८ वैशाख १ गते भएको उक्त घट्नाको रहस्य गर्भमै छ। यो घट्ना निकै फिल्मी शैलीमा घटेको थियो। बिहान ९ बजे धापासी नेचर क्लब नजिकैको निवासबाट बसुन्धराको उकालो चढ्ने क्रममा गोली प्रहार भएपछि मेहबुब ज्यान जोगाउन यताउति भाग्दै सडकमा ढलेका थिए। अपराधीहरू उनकै मोटरसाइकल चढेर नजिकैको प्रहरी चौकी छेउबाट कान्ति अस्पताल जाने सानो गल्लीमा छिरेका थिए।
उनीहरूले लगाएको टिसर्टको रंगसमेत प्रत्यक्षदर्शीहरूले सञ्चारकर्मी र प्रहरीलाई भनेका थिए। घटनाको लगत्तै नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू घटनास्थल पुगेका थिए। प्रहरीले तालिमप्राप्त कुकुरमार्फत घटनास्थल र मोटरसाइकल छाडेको ठाउँमा अनुसन्धान गरेको थियो। अपराधीलाई पछ्याएको कुकुर तिलिंगेटार प्रहरी चौकीसम्म पुगेर भ्रमित भएको थियो। त्यही चौकीअगाडिको बाटोबाट अपराधीहरू दुई पटक आवतजावत गरेको र त्यहीबाट गाडी चढेर भागेको पक्कापक्की भएको थियो।
चक्रपथजस्तो ठाउँमा बिहानै भएको उक्त घटनाले राजधानीको फितलो सुरक्षास्थितिको पोल खोलेको थियो। दूतावासले त्यतिबेला नेपाल सरकारले गहन खोजतलास गरी आसिफमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई न्यायालयसम्म पुर्‍याउने आशा व्यक्त गरेको थियो। निकै दबाब परेपछि प्रहरीले व्यावसायिक सुटरले यो घटना गराएकोसम्म स्वीकार गर्‍यो। घटनाका सम्बन्धमा नागरिकले अझै एउटा प्रश्नको जवाफ पाउन सकेका छैनन्। त्यो हो— 'आखिर आक्रमणकारी को थिए? स्वदेशी, विदेशीवा दुवैको मिलेमतो?'
कम्मरमा कमिज बाँधेर हिँडिरहेको थियो।
के भएको थियो श्रीकृष्णलाई ?
विश्वकप फुटबल कसले जित्छ, किन ?
विश्वकप फुटबल कसले जित्छ, किन?